Monday November 19, 2018 - 11:52:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanayo wadanka Suuriya ayaa sheegaya in 20 meeyo qof oo shacab ah lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Isbaheysiga reergalbeedka ka fuliyeen qeybo katirsan gobolka Deri Zoor ee dhaca bariga wadankaasi.
Duqeynta oo aheyd mid xoogan ayaa ka dhacday Tuulada Abul Xasan oo hoos tagta magaalada Hejiin, waxaana lasoo sheegayaa in ay wax ku noqdeen dad gaaraya 43 qof oo u badan dumar iyo carruur.
Inta la xaqiijiyey 17 carruur ah iyo 12 dumar ah ayaa duqeyntan cusub ku dhintay in ka badan 15 kalena waxaa la dhigay isbitaallada caafimaadka sida lagasoo xigtay dad ku sugan tuuulada uu weerarku ka dhacay.
Isbaheysiga uu mareykanku hogaaminayo ayaa duqeymahan ka geysanayay baadiyaha gobolka Deri Zoor tan iyo isbucyadii lasoo dhaafay halkaas oo ay howlgallo ka wadaan Ciidanka Suuriya ee demoquraadiga ah iyo Maleeshiyaadka kurdida ah ee Pkk loo yaqaan.
Dadka dhaawacmay ayaa la geeyey isbitaallada caafimaadka magaalada Hejiin, walina waxaa jirta cabsi xooggan oo laga qabo duqeyma kale oo isbaheysigu ka fuliyo magaalada Hejiin iyo deegaannada ku xeeran ee dhaca bariga wadanka Suuriya.
Duqeyntan ayaa daba socota duqeyn kale oo maalinkii talaadada ka dhacday Tuulada Shagfah oo isla gobolkan hoos tagta, halkaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 38 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen illaa 32 kale sida lagu sheegay warbixin uu qoray Markazka xuquuqul insaanka ee Suuriya oo fadhigiisu yahay magaalada London.
Markazka ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Isbaheysiga reer galbeedka ay dadkan si kas ah u bartilmaameedsadeen, goobta ay duqeyntu ka dhacdayna aysan ku sugneen kooxaha mucaaradka ah ee ka dagaalama wadanka Suuriya, kuwaas oo kasoo horjeeda Nidaamka Bishaar Al-Asad.
Eedeynta Markazka ayaa kusoo aadeysa xilli Afhayeenka guud ee isbaheysiga reer galbeedka ninka lagu magacaabo Shon Raayen uu ka dhawaajiyey, in ciidankooda ay ku dadaalayaan ka fogaanshaha inay bartilmaameedsadaan goob ay dad shacab ah ku sugan yihiin, sidoo kalena ay baaritaano ku sameyn doonaan duqeyn kasta oo ay ka geystaan gobolka Deri Zoor iyo deegaanada ku xeeran ee isbaheysiga uu ka howlgalo.
Isbaheysigan ayaa dagaalka wadanka kusoo biiray sanadki 2014ka, si ay ula dagaalamaan dadka musliminta ah oo xiligaas qarka u saarnaa in ay xukunka ka tuuraan Nidaamka dhiigya cabka ah ee bishar Al-Asad, wixii xiligaas ka danbeeyana waxa ay ka qeyb qaadanayeen dagaallada ka holcaya wadanka Suuriya tan iyo sanadki 2011ka.